Loading Product | Codashop
သင်၏ဂိမ်းအတွက်ငွေပေးချေရန် အမြန်ဆုံးအလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းဖြင့် ဝယ်လိုက်ပါ။
လတ်တလော လဲလှယ်ခြင်းမတည်ငြိမ်မှုများနှင့် ဈေးကွက်အခြေအနေများကြောင့် 14/09/2021 မှစတင်ပြီး non-Myanmar MLBB account များ၏ ဝယ်ယူမှုများမှ စိန်များကို Moonton ဘက်မှ နှုတ်ယူသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ အသေးစိတ်ကို ဒီလင့်ခ်‌တွင် ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
Mobile Legends စိန်ကို စက္ကန့်အနည်းငယ် အတွင်းဝယ်ယူလိုက်ပါ။သင်၏ Mobile Legends user ID ဖြည့်ပါ၊ သင်ဝယ်လိုသော Diamonds ပမာဏကို ရွေးချယ်ပါ၊ ငွေပေးချေမှုကို ဆောင်ရွက်ပါ၊ ထို့နောက် သင်၏ MLBB အကောင့်အတွင်းသို့ ဝယ်ယူထားသည့် Diamondများ ချက်ချင်း ဝင်ရောက်လာမည် ဖြစ်သည်။
သင်ဝယ်ယူပြီးပြီးချင်း စိန်ကို ချက်ချင်းမရရှိပါက ဂိမ်းမှထွက်ပြီးပြန်ဝင်ပေးပါခင်ဗျာ။
မိမိ စိတ်ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ငွေချေစနစ် MPT, Ooredoo, easyPoints, Card Payments, ATOM. တွေနဲ့ ပေးချေလိုက်ပါ။ Credit ကတ် ၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း နှင့် Login ဝင်ရခြင်း စသဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန်မလိုပါ!
အခုပဲ Mobile Legends: Bang Bang ကို ဒေါင်းလုတ်ဆွဲပြီးတော့ ကစားလိုက်ပါ။
1အသုံးပြုသူ ID ထည့်သွင်းပါ
သင်၏ အသုံးပြုသူ ID ကို ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် ဂိမ်းအတွင်း ပင်မမျက်နှာပြင်၏ အပေါ်ဘက် ဘယ်ဘက်ထောင့်ရှိ သင့်ကိုယ်စားပြုပုံကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ထို့နောက် "အခြေခံအချက်အလက်" သို့ သွားပါ။ သင်၏ အသုံးပြုသူ ID ကို သင့်ကိုယ်စားပြုအမည်အောက်တွင် ပြသထားမည်ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူ ID အပြည့်အစုံကို ဤနေရာတွင် ဖြည့်သွင်းပါ၊ ဥပမာ- 12345678(1234)။
26 Diamonds +3Bonus
37 Diamonds +4Bonus
184 Diamonds + 18 Bonus
367 Diamonds + 37 Bonus
734 Diamonds + 95 Bonus
1833 Diamonds + 324 Bonus
2932 Diamonds + 557 Bonus
3666 Diamonds + 696 Bonus
5498 Diamonds + 1100 Bonus
7330 Diamonds + 1466 Bonus
အခြား ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကို အသုံးပြုချင်ပါတယ်
ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ အချိန်နှင့်တပြေးညီ အချက်အလက်များ ရယူပါ။
စျေးကွက်နှင့်မိတ်ဖက်များGame ထုတ်လုပ်သူများအတွက်စည်းမျဉ်းဥပဒေများသတင်းအချက်အလက်လုံခြုံမှု မူဝါဒ